Isboortiga Jirka - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Faa'iidooyinka + > Isboortiga Jirka
CHPW waxay dabooshaa jimicsiga sanadlaha ah ee cunugaaga.
Si adag u ciyaar, amaan ahaaw
Ciyaaraha kooxdu waa hab cajaa’ib leh oo carruurtu ku kasbadaan saaxiibbo kuna noqdaan kuwo firfircoon. Markayna tahay caafimaadka qoyskaaga, nagama qabsan doontid dhinac. Marka lagu daro baaritaanka sanadlaha ah ee ilmahaaga, Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) wuxuu daboolaa hal isboorti oo jimicsi ah sanadkiiba cunug kasta oo jira 6 illaa 18.
Adeegani wuxuu ku saabsan yahay kharash dheeraad ah malahan adiga.
Maxay tahay sababta loo helo jimicsi jir ahaaneed?
Isboorti jimicsi ayaa qiimeynaya in ilmahaagu si nabadgelyo ah ugu ciyaari karo cayaartooda, ama haddii ay jiraan shuruudo ay tahay in lala socdo xilligan. (Marar dhif ah, dhakhtarka ilmahaaga ayaa laga yaabaa inuu kugula taliyo inay ka fogaadaan cayaaraha iyo waxqabadyada qaarkood.) Waa qayb ka mid ah sawirka weyn ee caafimaadka ilmahaaga.
U diyaargarowga jimicsiga ilmahaaga
Gobolka Washington wuxuu ubaahan yahay caruurta fasalada 6 iyo wixii ka dambeeya inay helaan jimicsi jir ahaaneed kahor inta aysan bilaabin isboorti ama xilli cusub. Waa fikrad fiican inaad jadwal sameysid jirka 3 ilaa 4 asbuuc ka hor inta uusan bilaabmin xilli ciyaareedkoodu.
La xiriir dhakhtarka ilmahaaga si aad u qorsheysid jimicsigooda jir ahaan. Markaad tagto ballanta, u diyaargarow inaad ka jawaabto su'aalaha ku saabsan taariikhda caafimaadka qoyskaaga iyo caafimaadka ilmahaaga.
Inta lagu jiro qaybta jirka ee baaritaanka, dhakhtarku wuxuu badanaa:
Qor dhererka iyo miisaanka ilmahaaga
Qaado cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha (garaaca wadnaha iyo garaaca)
Tijaabi aragga ilmahaaga
Hubi wadnaha, sambabada, caloosha, dhegaha, sanka, iyo cunaha
Qiimee qaabka cunugaaga, kala-goysyada, awooda, iyo dabacsanaanta